ktmkhabar.com - महरा मन्त्री बन्दै, अरु को को छन् मन्त्रीको लाइनमा ?
महरा मन्त्री बन्दै, अरु को को छन् मन्त्रीको लाइनमा ?
मंगलबार, असार २९ २०७८
कृष्ण बहादुर महरा / फाइल तस्विर
काठमाडौं – माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा मन्त्री बन्ने भएका छन् । माओवादी केन्द्रको कोटाबाट उनी मन्त्री बन्ने बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रले मन्त्री छान्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएकाले उनको सम्भावना प्रवल रहेको प्रचण्ड निकट श्रोतको भनाई छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मंगलबार पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। देउवालाई साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमवार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। देउावाको यही सरकारमा महरा मन्त्री बन्ने छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, डिला संगौला लगायतको नाम चर्चामा छन् । यद्यपि मन्त्रीहरुको अन्तम टुङ्गो सभापति देउवाले लगाउने छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले शीर्ष नेताले मन्त्रीबारे टंगो लगाउने बताए। ‘नेताहरुले जसलाई चाहनुहुन्छ अहिलेलाई त्यही हुन्छ। टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने। शीर्ष नेताकै नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुनेबारे माओवादी भित्र छलफल सुरु भएको छ। त्यसका लागि महरासहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, पम्झा भुषाल, देवेन्द्र पौडेलको नाम चर्चामा छ।
पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन श्रेष्ठलाई प्रचण्डले मन्त्री बनाउने सम्भावना बढी रहेको प्रचण्ड निकट नेताले बताए। जसपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ भने जनमोर्चाबाट दर्गा पौडेल मन्त्री बन्ने भएकी छन् ।
कृष्णबहादुर महरामाओवादी केन्द्र